လူမှုရေး Buzz ကလပ်: Share နှင့်မျှဝေပါ။ Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီ 18, 2013 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
Social Media Marketing World ကဲ့သို့သောကွန်ဖရင့်တစ်ခုကိုတက်ရောက်ခြင်း၏ကြီးမားသောရှုထောင့်တစ်ခုမှာသင်၏ကွန်ယက်၏သက်တောင့်သက်သာကိုစွန့်လွှတ်ပြီးအခြားသူများစွာဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ကွန်ယက်အရွယ်အစားမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ သင်သည်အတွင်းသတင်းများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကန့်သတ်လေ့ရှိသည်။ ဤကဲ့သို့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်သို့သွားခြင်းကသင့်အားကွန်ယက်အသစ်များစွာသို့ပွင့်လာစေသည်။ San Diego မှလူများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောလူများနှင့်နည်းပညာများအကြောင်းဆက်လက်ရေးသားသွားပါမည်။
တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာဖြစ်ပါတယ် လူမှုရေး Buzz ကလပ်။ ကျွန်တော်တို့ကလပ်ကိုအလျင်အမြန်ဝင်လာပြီးတွဲဖက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးအဲ့ဒီအသင်းနဲ့ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တော့မှာပါ။ လူမှုရေး Buzz ကလပ်ဆိုတာဘာလဲ။
တစ်ချိန်ကသူငယ်ချင်းနှစ် ဦး နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်၎င်းတို့အတူတကွမည်သို့အလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်းနှင့်သူတို့၏ဖောက်သည်အသစ်များအကြောင်းတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး မည်သို့ဖြန့်ဝေနိုင်မည်ကိုပြောနေကြသည်။ တစ်ခုမှာသူမအလုပ်လုပ်နေသော ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်နှင့်အချို့သောထိတွေ့မှုရရှိရန်လိုအပ်သည်။ နောက်တစ်ခုမှာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နေသည့်လှူဒါန်းမှုနှင့်အလှူငွေများတိုးမြှင့်ရန်ထိတွေ့မှုလိုအပ်သည်။ ဖောက်သည်များသည်ပရိသတ်များနှင့်နောက်လိုက်များနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိတော့ကြောင်းသူတို့သိသည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပြန်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များသည်၎င်းတို့၏လူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုမြင်တွေ့လို။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသို့အသွားအလာပို့ခြင်း၊ အမှန်တကယ်ဖောက်သည်များသို့မဟုတ်အလှူရှင်များသို့ပြောင်းလဲလိုခြင်းဖြစ်သည်။
သူတို့ကဒီဟာကိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့သဘောတူတယ်။ သူတို့ဟာအလားတူစိန်ခေါ်မှုမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ ပြီးတော့သူတို့က“ ဘာလုပ်မလဲ” တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဖောက်သည်များနှင့် ပါတ်သက်၍ မှန်ကန်သော၊ အပြုသဘောဆောင်သည့်နည်းဖြင့်ဖြန့်ဝေရန်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လူမှုရေးမီဒီယာနှင့်အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနယ်ပယ်ရှိကျွမ်းကျင်သူများပါ ၀ င်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပူးပေါင်းကွန်ယက်ကိုတည်ထောင်နိုင်လျှင်ကော။ ၎င်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုတိုးချဲ့ရန်နှင့်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများရှိအရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုမျှဝေရန်အားပေးလိမ့်မည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက် ROI ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အကြောင်းအရာသည်ကမ္ဘာအနှံ့သို့ဖြစ်စေ၊ ဒေသတွင်းဖြစ်စေဖြစ်စေ၊ ရည်ရွယ်ထားသည့်အလားအလာများတိုးပွားလာစေရန်အတွက်၎င်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါကဘာဖြစ်မည်နည်း။ ပိုကောင်းတာတောင်မှအဖွဲ့ ၀ င်တွေကသူတို့ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာတွေကိုဝေမျှနိုင်ပြီး၊
အဘို့အစိတ်ကူး လူမှုရေး buzz ကလပ် မွေးဖွားခဲ့သည်။ Viola! ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှု!
အဆိုပါ လူမှုရေး Buzz ကလပ် ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပြီးလူမှုမီဒီယာများတွင်ကျွမ်းကျင်သောစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ၊ လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတိုင်ပင်ခံများကိုကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးပူးပေါင်းပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာဝေမျှခြင်းစနစ်မှတဆင့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်တည်ဆောက်သူများဖြစ်လာရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ ခွဲဝေမှုသည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် မူတည်၍ အသင်းဝင်တိုင်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကြီးမားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်သူတို့၏သဘာဝကွန်ယက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်စကားလုံးများကိုထုတ်ယူခြင်းသည်အသင်းဝင်အားလုံး၏ပထမဆုံး ဦး စားပေးဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်၏သုံးစွဲသူအကြောင်းအရာကိုပရိသတ်များကိုပစ်မှတ်ထားလိမ့်မည်။ အသင်းဝင်တစ် ဦး သည်ပစ်မှတ်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုမျှဝေခြင်းမှရမှတ်များရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သူ / သူမ၏ client အကြောင်းအရာများကိုရေကန်ထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လူတိုင်းသည်အကြောင်းအရာများကိုမျှဝေခြင်းကိုသေချာစေပြီးကလပ်သည်သင်ပိုင်ဆိုင်သောသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်သောအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ buzz ကိုဖန်တီးရန်အဓိကအင်အားဖြစ်သည်။
သင် login လုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အချက်များကိုမျှဝေရန်နှင့်ထုတ်လုပ်ရန်အကြောင်းအရာစာရင်းတစ်ခုနှင့်သင်တွေ့သည်။ ကျွန်ုပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကျေနပ်သည်မှာကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်သောစစ်ထုတ်မှု၏နောက်ဆုံးအဆင့်နှင့်ကျွန်ုပ်မျှဝေသည့်အကြောင်းအရာ၏အရည်အသွေးဖြစ်သည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ယက်ထဲကိုတစ်ခုခုကိုလွှင့်ပစ်နိုင်သည့်အလိုအလျောက်အင်ဂျင်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သောအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုနိုင်၊ ဖတ်နိုင်၊ ဝေမျှနိုင်သည်။
Tags: Facebook ကlinkedinအပြန်အလှန်အကျိုးပြုမျှဝေခြင်းလူမှုရေး buzz ကလပ်ကျောက်တံတားတွစ်တာ